American Airlines hanomboka serivisy mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i SVG
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » American Airlines hanomboka serivisy mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i SVG
Enga anie 4, 2018
American Airlines androany dia nanambara an'i St.Vincent sy ny Grenadines ho iray amin'ireo toerana itiavan'ny mpanjifany "safidy vaovao hialana amin'ny hatsiaka amin'ny sidina mandavantaona sy mandavantaona kokoa". Famoahana navoakan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, milaza fa "ny amerikanina no mpitatitra amerikana voalohany nanompo an'i St.Vincent sy ny Grenadines (SVD) miaraka amin'ny fampidirana serivisy serivisy mandritra ny taona avy amin'ny MIA." Ny famotsorana dia manambara ihany koa fa ny serivisy mandritra ny taona dia hiasa amin'ny Airbus A319 isaky ny sabotsy manomboka ny 22 desambra 2018. Araka ny tapakilan'ny seranam-piaramanidina dia hamidy amin'ny 14 Mey 2018.
Tale jeneralin'ny Fahefana misahana ny fizahan-tany SVG Andriamatoa Glen Beache naneho ny hafaliany tamin'ny fanambarana nataon'ny American Airlines dia nilaza fa "ny fananana serivisy mivantana avy any Miami dia mpanakalo lalao ho an'ny firenena. Ity serivisy ity dia hanamora kokoa ny fitsidihan'ny mpitsidika, toy ny diaspora, hiala vakansy any St.Vincent sy Grenadines ”. Nanambara ihany koa izy fa "Miami ho iray amin'ireo ivon-toerana ifandraisana lehibe any Etazonia dia ho vavahady tena tsara ho an'ireo mpitsidika avy any Atlanta, Chicago, Dallas ary na dia i United Kingdom aza mba hahazo ilay hatsarana izay St.Vincent sy Grenadines". Tamin'ny taona 2017, ny tsena amerikana avaratra dia nitaky 42% ny fijanonana mihoatra ny mpitsidika an'i St.Vincent sy ny Grenadines.
Ny serivisy American Airline nomanina tsy an-kijanona avy any Miami dia manome safidy ho an'ny mpitsidika sy ny Vincentians hitsangatsangana mivantana mankany sy avy any amin'ny toerana itodiana. Amin'izao fotoana izao, Caribbean Airlines dia miasa serivisy tsy tapaka fijanonana isan-kerinandro avy amin'ny JFK International, USA ary ny Air Canada Rouge serivisy Autum / Winter voatondro tsy miato isan-kerinandro avy any Pearson International, Canada. Misy ihany koa ny serivisy Sunwing misy chartered izay miasa any ivelan'i Pearson mandritra ny lohataona / fahavaratra.
Dream Cruises dia mamoaka ny eSports voalohany manerantany amin'ny World Dream
Airbus: baiko 68, fanaterana 51 amin'ny volana aprily 2018